Umphakeli wendwangu yomfaniswano wobungcweti, insizakalo yesevisi eyenziwe ngezifiso. - shaoxing Yun Ai textile Co., Ltd.
Ulapha: ekhaya - Mayelana NATHI
I-Shaoxing Yun Ai textile Co., Ltd. isebenza ku-fabirc efanayo futhi ifanele ukuthuthukiswa kwendwangu, ukukhiqizwa nokuthengiswa, sinomhlinzeki wendwangu yemikhiqizo eminingi, njengoMcDonalds, i-Youngor, i-HLA njalonjalo. silawula ukhiye wekhwalithi kahle.
Sisebenza ngokukhethekile ngendwangu yomfaniswano nokufanele. Kubandakanya indwangu yomfaniswano wesikole, indwangu yomfaniswano wezindiza (yeweta yomoya nomshayeli wendiza), indwangu yomfaniswano wehhovisi kanye nendwangu yomfaniswano wokudla. Kwezendwangu zethu ezifanelekayo, siyayihlukanisa ngokwakhiwa kwayo - indwangu yokugqoka uvolo nendwangu yokufanela ye-viscose. Ngaphandle kwalokho, singakwazi futhi ukukhiqiza ukucaciswa okukhethekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende ethu. Siyakwamukela efektri yethu ukuze ihlolwe.
Izindwangu zenkampani yethu, zineqembu lamakhasimende aqotho. Indwangu engafani nomkhiqizo wethu omkhulu, ayikaze yehlise amakhasimende ethu. Indwangu yomfaniswano wesikole ithunyelwe ngaphandle eNigeria, eMelika, e-United Arab Emirates, emazweni angaphezu kwama-20, futhi indwangu yethu yomfaniswano wezindiza inezinkampani ezingaphezu kwezingu-5 zezindiza eCanada naseLaos. Ngonyaka owedlule ka-2020, sisebenzisana nomenzeli kaMcDonald ukuhlinzeka ngendwangu yamabhulukwe omfaniswano wabasebenzi ezinkulungwaneni zezitolo ezingaxhunyiwe ku-inthanethi.
Futhi, eminyakeni yamuva nje, besibandakanyeke ezindwangu zoboya ezisezingeni eliphakeme futhi siphumelele ukudunyiswa ngazwi linye kumakhasimende.
Ngokuzayo, sizoqhubeka nokuqhubekela phambili, siqhubeke nokulima emkhakheni wendwangu efanayo neyendwangu, futhi sihlole izindwangu ezahlukahlukene zamakhasimende ethu. Kulo nyaka ngo-2021, saqala ukuzibandakanya nezindwangu ezisebenzayo, sikholelwa esikhathini esizayo esiseduze, izindwangu zethu ezisebenzayo zizokunika isimanga esikhulu.
Siyiqembu elincane futhi elinomdlandla elineminyaka yobudala engama-28. Njengamanje, iqembu linabantu abangu-11 abaphethe ibhizinisi, ukusebenza, kanye nezinsiza kusebenza, abasebenzi abangaphezu kwe-120 efemini. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukuxhumana okuhle nokubambisana nokubambisana kubaluleke kakhulu kunezinombolo.
Kungashiwo ukuthi kungumsebenzi, kepha futhi nempilo yethu. Kuyinto elula, enomusa, enokwethenjelwa, futhi esekelanayo. Lesi yisiko lenkampani yethu kanye nesiqubulo sempilo esivumelana ngaso sonke.